Doon meydad iyo madaxyo bini'adam ay saaran yihiin oo soo caarisay - BBC News Somali
Doon meydad iyo madaxyo bini'adam ay saaran yihiin oo soo caarisay
Lahaanshaha sawirka EBU
Meeydadka shan qof iyo madaxyo bini'adam oo labo ah ayaa laga helay haraarag doon ku soo caarisay xeebta Japan.
Doonta ayaa kusoo caarisay xeybaha jasiiradda Sado ee dalka Jaapan, jimcihii shalay ahaa, maanta ayay dowladda u suurogashay iney macluumaa ka hesho doonida.
Doonta oo uu ka muuqday bur-bur xoogan ayaa waxaa dhinac kaga xardhanaa luuqadda Kuuriya.
Booliiska ayaan xaqiijin in madaxyada ay heleen iyo meydadka ay isleeyihiin iyo in kale balse warbaahinta Japan ayaa sheegaysa in meydadka qaarkood ay dhic lafohooda muuqdeen, taasi ayaana muujinaysa in dadka dhintay ay in muddo ah badda ku jireen.
''Doomaha aan la garayn ayaa la aaminsayahay in ay kasoo sharaacdaan Kuuriyadda Waqooyi kuwaasi oo inta badan kusoo caariya xeebaha Japan''.
Kuuriyada Waqooyi oo ''hub muhiim ah'' Tijaabisay
Kuuriyada Waqooyi oo badashay borobagaandadii
Doomahaasi badankood waa kuwa eber ah amaba waxaa gudohooda laga haraaga jirka bini'aadanka. Inta lagu gudo jiro xiliga xagaaga ah ayaa waxay dadka doonta saaran u dhintaan macluul iyo harraad.
Dhacdooyinkii hore waxaa doomhaasi aan la garanayn waxaa laga heli jiray meydadka dadka ka soo baxsada Kuuriyada Waqooyi balse waxaa kaloo suurtagal in saboolnimada ay ku khasbeyso dadka Kuuriyada Waqooyi iney meelo fog-fog u kalluun dsoontaan.
Sannadkii 2017-kii, waxaa la arkay kalluumeysato nool oo saaran dooni waxayna codsadeen in dib loogu celiyo Kuuriyada Waqooyi.
Khilaafka haatan taagan ee u dhaxeeya Japan iyo Kuuriyada ayaa sababi kara in baaritaan dhameystiran lagu sameeyo dhacdadaan ugu dambeysay ee doonidan ku soo caarisay Japan.
Jimcihii, warbaahinta qaranka Japan NHK ayaa si lama filaan ah u baahisay in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal balse markii dambe ayay dib ka saxday oo raalli gelin ayay ka bixiyeen. Bishii November Kuuriyada Waqooyi ayaa japan ugu hanjabtay iney gantaal ballistic ah ku tijaabineyso